Will Smith wuxuu bixin doonaa 4 -ta Luulyo Bandhigga Bandhigga rashka ee New Orleans - Dhaqanka Pop
Will Smith wuxuu bixin doonaa 4 -ta Luulyo Bandhigga Bandhigga rashka ee New Orleans
Wariyaha Hollywoodka leeyahay bartay in Will Smith uu si buuxda ugu bixiyay $ 100,000 afartii Luulyo ee rashka lagu soo bandhigay Wabiga Mississippi ee New Orleans.
Ka dib markii mas'uuliyiinta magaalada lagu qasbay inay baajiyaan rashkii sannadihii ugu dambeeyay masiibada darteed, dhibaatooyinka dhaqaale ayaa halis geliyay bandhigga sannadlaha ah ee sannadkii labaad oo toos ah. Taasi waa, ilaa Maalinta Madax-bannaanida Aktarka iyo kooxdiisa Westbrook Entertainment ayaa badbaadiyay maalinta.Mayyor LaToya Cantrell ayaa bartiisa Twitter -ka ku soo qoray inuu ku ammaanayo Smith deeqsinimadiisa.
Justin timberlake janet jackson super baaquli
Smith wuxuu hadda ku sugan yahay New Orleans isagoo ka shaqeynaya filimka Antoine Fuqua ee jihaynta leh Xoraynta , oo markii hore lagu duubay Georgia ka hor inta aan wax -soo -saarka loo wareejin Louisiana ka dib markii gobolku meel mariyey sharciyada codbixinta ee xaddidan.
Waqtigan xaadirka ah, Qaranku wuxuu la imanayaa taariikhdiisa wuxuuna isku dayayaa inuu baabi'iyo sifooyinka cunsuriyadda hay'adeed si loo gaaro caddaalad jinsi oo run ah, ayay Smith iyo Fuqua ku sheegeen bayaan wadajir ah. Ma siin karno damiir wanaagsan taageero dhaqaale oo ay siiso dowlad soo saarta sharciyada codbixinta ee dib -u -dhaca oo loogu talagalay inay xaddido gelitaanka cod -bixiyayaasha.
nba hal ciyaar 3 dhibic dhibic
MLB wuxuu ka soo jiiday bilahaas Ciyaarta Xiddigaha oo dhan Atlanta. Ed Bastian, Maamulaha Delta Air Lines, oo xaruntiisu tahay Atlanta, loo yeedhay sharciga aan la aqbali karin oo ka faallooday sida fikirka hindise sharciyeedkan uu ugu salaysnaa been, isagoo u daliishanaya khaladaadka codbixiyeyaasha si khaldan oo aan kala go 'lahayn oo uu Donald Trump u afuufay. Shirkadda Coca Cola ee fadhigeedu yahay Atlanta ayaa iyaduna si cad u muujisay sida ay uga xun tahay cabbirka cabudhinta cod-bixiyayaasha.
Xoraynta wuxuu sheegaa sheekada runta ah ee adoon baxsad ah oo la yiraahdo Peter oo ka baxsaday beerta Louisiana wuxuuna ku adkeysan doonaa safar xun oo ay ka buuxaan harooyin khiyaano leh iyo kuwo dhiig-yacab ah si uu ugu gudbo Ciidanka Midowga.
sida loo shubo shukulaatada microwave -ka
waxa lagu darayo isku darka keega si qoyan looga dhigo
sida loo dubo keega qaansoroobaad
buttercream frosting leh gaabin iyo subag